अपेक्षा र सुनिता मिस एण्ड मिसेस ब्युटिफुल
काठमाडौं – मिस एण्ड मिसेस ब्युटिफुल नेपाल २०१७को उपाधि अपेक्षा ढुंगाना र सुनिता कर्माचार्यले जितेका छन् । अपेक्षले मिस र सुनिताले मिसेस तर्फको उपाधि चुमेका हुन् । राजधानीको नाचघरमा आयोजित अन्तिम स्पर्धामा अपेक्षाले १९ र सुनिताले ७ प्रतिस्पर्धी पछि उपाधि आफ्नो पोल्टामा परेका हुन् । अपेक्षाले बेस्ट स्माइलको समेत उपाधि उठाउँदा सुनि..
सुपरहिट चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ युट्युवमा हेर्नुहोस्
काठमाडौं – चार बर्षयताकै सार्वाधिक ब्यवसाय गर्न सफल चलचित्र ‘छक्का पन्जा’ यु–ट्य..
पूर्व प्रेमी/प्रेमिकालाई देख्ने बित्तिकै लुसुक्क भाग्ने यी ६ सेलिब्रिटी
आफ्ना पूर्व प्रेमिका/प्रेमीसँग कुनै पार्टीमा ठोक्किँदा कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने क..
बायोग्राफीमा करनको आश्चर्यचकित खुलासाः अजयका कारण टुट्यो काजोलसँगको २५ वर्षे सम्बन्ध
फिल्म निर्माता करन जोहरको बायोग्राफस् ‘द अनसूटेबल ब्वाई’ आजकाल निकै चर्चामा छ । ..
गीतकार सङ्घको छैटौँ साधारणसभा
काठमाडौँ – शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व कायम गरी समाजलाई पथ प्रदर्शन गर्ने खालका..
निलिमा बनिन् मिसेस गण्डकी
पोखरा – गोस्पेल मल्टीमिडियाको आयोजना रहेको बिवाहित महिलाहरुको सुन्दरी प्रतियोगिता मिसेस गण्डकी २०१७ को उपाधि निलिमा हिराचन श्रेण्ठले जितेकी छन् । पोखरामा सम्पन्न प्रतियोगीतामा ११ प्रतिस्प्रर्धीलाई पछि पार्दै गैह्रापाटनकी २५ बर्षिया श्रेष्ठले उपाधि चुमेकी हुन् । उनले ताजसँगै मोस्ट फेन्डली र मोस्ट पपुलर अवार्ड समेत आफ्नो पोल..
विवाहको अढाइ महिनापछि यी नायिकाले देखाइन् ‘बेबी बंप’, गर्भवती भएको पुष्टि
नायिका लिजा हेडन गर्भवती छिन् । भर्खरै उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एक बिकिनी फोटो सार्वजनिक गरी आफू गर्भवती भएको पुष्टि गरेकी छिन् । यो बिकिनी फोटोमा लिजाले आफ्नो ‘बेबी बम्प’ देखाइरहेकी छिन् । फोटोको मुनि अंग्रेजीमा लेखेकी छिन् ‘हम्बल बिगिनिङ (विनम्र सुरुवात)’ । यद्यपी, लिजा गर्भवती भएको खबर पहिले पनि नआएका भने होइनन् । लिजा हेडनल..
चकलेटी नायिका उषालाई जाडोको चिन्ता
काठमाडौं – केही दिनयता राजधानीमा जाडो निकै बढेको छ । यो जाडोले अभिनेत्री उषा खनाललाई पनि सताएको छ । जाडोबाट बच्न उनले बिभिन्न उपाय अपनाउने गरेकी छिन् । चिसो मौसममा उनको मुखको छालाका साथै हातमा पनि बिभिन्न समस्या देखा पर्ने गर्दछ । ‘जाडो याममा शरीरलाई अलिक धेरै ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा चिसोले छालामा बिभिन्न समस्या […]
यी नायकले श्रीमतीको नग्न फोटो सोसल मिडियामा गरिदिए पोष्ट
चर्चित हलिउड नायक च्यानिंग ट्याटमले सोसल मिडियामा आफ्नी श्रीमतीको नग्न फोटो सेयर गरेका छन् । च्यानिंगले श्रीमती जेना डेवनको श्यामश्वेत नग्न फोटो इन्स्टाग्राममा पोष्ट गरेका हुन् । यो फोटोमा जेना बेडमा नग्न हालतमा सुतिरहेकी छिन् । ट्याटमले जेनासँग सन् २००९ मा विवाह गरेका हुन् । सन् २००५ मा च्यानिंग ट्याटमसँग विवाहa गर्नुपूर्व नायक..
नायिका अन्नू कपूरले ओम पुरीलाई उनको अन्तिम अवस्थामा निकै प्रताडित गरिएको दाबी गरेकी छिन् । एक भारतीय नयूज पोर्टलसँग कुराकानी गर्दै उनकी कान्छी श्रीमती र छोरालाई निकै तनाव दिने गरेको उनले ठोकुवा गरिन् । यसैकारणले पुरी दोस्रोपटक जेठी श्रीमतीसँग नजिकिएको उनले जानकारी दिइन् । स्मरण रहोस् ओम पुरीको पहिलो विवाह सीमा कपुरसँग भएको थियो ..
यस्तो देखियो फष्टलुकमा निखिलको ‘निर्भय’
काठमाडौ — माघ २८, रिलिज मिति तय भएको चलचित्र ‘निर्भय’ले सो डेट परिवर्तन गरेको छ । निखिल उप्रेतीको अभिनय रहेको यो चलचित्र अब चैत्र ११ आउने छ । अभिनेता निखलको चलचित्र ‘किङ’ यहि पुस २९ रिलिज हुने भएपछि केही समयको अन्तरमा निखिलको चलचित्र ल्याउन निर्भय रिलिज चैत्र ११ पुर्याइएको निर्देशक मधुसुदन भट्टराईले बताए । चलचित्रको […]
शान्तीको ‘मत माया गर्ने मान्छे’
काठमाडौ — चलचित्र पत्रकार संघको अध्यक्ष तथा गीतकार शान्ति प्रियको अर्काे गीत ‘मत माया गर्ने मान्छे’ बोलको भिडियो रिलिज भएको छ । गीतमा संगीत सन्तोष श्रेष्ठको रहेको छ, भने स्वर प्रमोद खरेलले दिएका छन् । गीतमा सन्दिप शाही र अनामिका चौलागाईंले मोडलिङ गरेका छन् । गीत निर्मल शर्माले निर्देशन गरेका हुन् । गीतमा चोखो माया […]
राप्रपाकी नयाँ नेत्री रेखाले पृथ्वी जयन्तीमा सुनाइन् यस्तो गीत (भिडियो)
काठमाडौँ – गत महिना राप्रपामा प्रवेश गरेकी नायिका रेखा थापा पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा पनि सहभागी भइन् । पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आयोजित चियापानमा थापाले एउटा देशभक्ति गीत सुनाइन् । हेर्नुहोस् भिडियोः कार्यक्रममा हालसालै राप्रपा प्रवेश गरेकी गायिका कोमल वली पनि थिइन् । तर, उनले भने कुनै गीत गाइनन् ।
यस्तो छ ‘सारङ्क’ को फस्टलुक र ट्रेलर
काठमाडौं – नेपाली चलचित्र ‘सारङ्क’को प्रदर्शनको लागि तयार भएको छ । मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै निर्माणपक्षले चलचित्रको फस्ट लुक, पोष्टर, गीत र ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ । चलचित्र पहिले अमेरिकामा र त्यसपछि नेपालमा देखाइने निर्माता तथा निर्देशक विरेन्द्र हमालले बताए । सपना सिंह ठकुरी, सुर्वण खड्का, आकाश श्रेष्ठ, न..
३५० करोड कमाउने पहिलो बलिउड चलचित्र बन्यो दंगल
मुम्बई – आमिर खान अभिनित चलचित्र दंगलले बक्स अफिसमा हंगामा मच्चाउँदे एकपछि अर्को किर्तिमान तोडिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र सलमान खानको सुल्तानले बनाएको किर्तिमान तोडेको दंगल ३५० करोड भारु कमाउने पहिलो चलचित्र बनेको छ । चलचित्र रिलिज भएको १९ औँ दिनसम्म पनि यसले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्शका अनुसार चलचित्र..
फेरि विवादमा शाहरुखको रइस
मुम्बई – शाहरुख खानको नयाँ चलचित्र रइसमा पाकिस्तानी नायिका माहिरा खान रहेको कारण एकपछि अर्को विवादमा फँसिरहेको छ । दुई देशबीच देखिएको चिसोपनाको असर पछिल्लो समय बलिउडमा देखिन थालेको छ । हुनतः शाहरुखले चलचित्रलाई विवादरहित बनाउन एमएनएसका प्रमुख राज ठाकरेसँग सम्झौता पनि गरेका थिए । तैपनि चलचित्र पुनः विवादमा तानिएको छ । यसपटक विवाद..
फोटोसुटका लागि टपलेस भइन् टाइगरकी प्रेमिका
मुम्बई – डब्बु रतनानीको प्रतिक्षित क्यालेन्डर बुधबार रिलिज गरिँदैछ । रिलिजअघि बलिउड अभिनेता टाइगर श्रौफकी प्रेमिका दिशा पटानीले एक बोल्ड तस्विर आफ्नो इन्सटाग्राममा पोष्ट गरिन् । उक्त तस्विरमा दिशालाई टपलेश देखाइएको छ । उनले उक्त तस्विर डब्बु रतनानीको क्यालेन्डरका लागि भएको बताइएकी छिन् । उनीबाहेक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, प्रियं..
काठमाडौं –हिमालको गोठालो कृति लोकार्पण गरिएको छ । बुधबार एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले घिमिरेको ‘हिमालको गोठालो’ कृति विमोचन गरेका हुन् । विमोचनपछि डा. भट्टराईले कृतिमार्फत् नेपालको हिमाली क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र गुरुङ जनजीवनको सुन्दर चित्रण भएकोमा आफुले गर्व गरेको बताए । भट्टराईले भने– ‘नेपाल सबै जा..
अम्बिकाले चुमिन् मिसेस हिमालयनको ताज
काठमाडौं – ‘मिसेस हिमालयन –२०१७’ को उपाधी अम्बिका तिमल्सिनाले चुमेकी छन् । जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजित प्रतियोगितामा अम्बिका शिर्ष बिजेता बन्दा पुनम बर्देवा फस्ट रनरअप, सुशिला गौतम सेकेन्ड रनरअप र अम्बिका गुरुङ थर्ड रनरअप घोषित भए । बिवाहित महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र सामाजिक काममा अग्रसर गराउने उद्देश्यले एमाजोन इन्टरटे..
यस्तो बनेको छ लालटिनको ह्वीस्की गीत
काठमाडौं – चैत १८ गते रिलिज हुने चलचित्र ‘लाटटिन’ले आफ्नो प्रचार प्रसारलाई बिस्तारै तिब्र बनाउदै लगेको छ । यस्तैमा चलचित्रले ‘ह्वीस्की…बोलको गीतमा लिरिकल भिडियो ल्याएको छ । विनोद ढकाल, सोमिया बराइली र किरण माइकलद्धारा स्वरबद्ध गीतमा हिपहप र पप शैली फ्युजन गरिएको छ । दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, केकी अधिकारी, अर्जुनजंग शाही..
काठमाडौं – अखिल नेपाल चलचित्रकर्मी संघको आयोजनामा आज (पुस २७) देखि माघ २ गते (११ देखि १५ जनवरी)सम्म धरानमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सब नेपाल–२०१७’ हुन लागेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महोत्सवको आजै उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि छ । महोत्सबको उद्घाटन विपि कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानक..
काठमाडौं – ‘अल नेपाल डान्स च्याम्पियनसिप २०१६’ को अन्तिम स्पर्धा माघ १ गते बुटवलमा हुने भएको छ । एएनएफए स्टुडियममा आयोजना हुने प्रतियोगीतामा जुनियर तर्फ १० र सिसनयर तर्फ १२ प्रतियोगी बीच कडा स्पर्धा हुनेछ । देशभर आयोजित बिभिन्न अडिसनबाट यी प्रतियोगी छानिएका हुन् । बागेश्वरी संगीतालय बुटवलले जुनियर र सिनियर दुई ब्याचमै नृत्यमा उत..
काठमाडौं – पछिल्लो समय छोटा चलचित्र निर्माणको लहरै चलेको छ । यसरी निर्माण गरिने चलचित्रमा कतिले अस्लिल विषयबस्तु उठाउने गरेका छन, भने कतिले बिभिन्न सामाजिक र चेतना मुलक बिषय प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । यस्तैमा खुसीका बिषयमा छोटो चलचित्र ‘ह्याप्पिनेस’ निर्माण भएको छ । विस्वास भण्डारीको निर्देशन रहेको यो चलचित्रमा संघर्षमय जीवन बित..
ओम पुरीको मृत्यु सम्बन्धि विभिन्न खबर आइरहेका बेला उनकी जनसम्पर्क अधिकारीले नयाँ खुलासा गरेकी छिन् । स्मिता सिंहका अनुसार ओम पुरीले मृत्युको एक हप्ता पहिलेदेखि नेपालमा आएर आफ्नो देह त्याग्ने बारे कुराकानी गरिरहेको एक भारतीय मिडियासँगकमो कुराकानीमा उनले जानकारी दिएकी छिन् । उनका अनुसार ओमपुरीले अज्ञातवश एकाएक लुम्बिनी जाने इच्छा..
दुई श्रीमतीले भिन्दा भिन्दै राखे ओम पुरीको श्रद्धाञ्जली सभा, यी सेलिब्रिटी पुगे
जुहुको इस्कोन टेम्पलमा दिवंगल ओम पुरीको ‘चौथा’ भयो । यो क्रममा उनकी कान्छी श्रीमती नन्दिता पुरी र छोरा ईशानको उपस्थिती रह्यो । ओम पुरीलाई श्रद्धाञ्जली दिना लागि थिएटर आर्टिस्ट टम अल्टर पनि पुगे । स्मरण रहोस्, ओम पुरीको ६६ वर्षको उमेरमा जनवरी ६ तारिखमा मृत्यु भएको थियो । ओम पुरीको प्रार्थना भेला उनका दुईजना श्रीमतीले […]